UPaz Castelló. Udliwanondlebe nombhali we Akukho namnye kuthi oya kuba nemfesane | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Inoveli, Ezahlukeneyo
Ukufota: iwebhusayithi yePaz Castelló.
UPaz Castelló, Umbhali ovela kuAlicante kunye nomsebenzi omde kwihlabathi lezonxibelelwano, uveza inoveli entsha enesihloko esithi Akukho namnye kuthi oya kuba nemfesane. Waqala ukupapasha ngo-2013 nge Ukufa kwe-9. Ezinye izihloko bezikho Igama lam libhalwe kumnyango wendlu yangasese, Iinyanga ezilishumi elinesibhozo kunye nosuku y Isitshixo 104. le enkosi kakhulu ixesha ondinike lona loku udliwano ndlebe apho asixelela khona ngenoveli entsha nokunye okuninzi.
UPaz Castelló - Udliwanondlebe
UNCWADI NGOKU: Inoveli yakho yamva ngu Akukho namnye kuthi oya kuba nemfesane. Usixelela ntoni kuyo?
IPaz CASTELLÓ: En Akukho namnye kuthi oya kuba nemfesane (Editions B) ibali Ibali likaCamila noNora, ekunokubonakala ngathi injalo ekuqaleni abafazi ababini abahluke kakhulu ngokobudala kunye neemeko ezibalulekileyo, kodwa kuya kufunyanwa kwakamsinya ukuba banento efanayo: ezimbini Babesetyenziswa ngamadoda exesha labo elidlulileyo kwaye ngoku aboyiki ukujongana nabo, ukwenza izigqibo ezichaphazela ubomi babo. UCamila ngumfazi oqolileyo ogqiba kwelokuba ahlukane nomyeni wakhe. Oku kumenza ukuba afikelele kwisivumelwano sokukhawulwa komtshato wakhe.
Ngelixa ephanda iinjongo ezifihliweyo zeqabane lakhe langaphambili, udibana noNora, umfundi oselula, oneminyaka engamashumi amabini emncinci kuye, obegcina imfihlo eyoyikisayo iminyaka kwaye eza kuAlicante efuna ukuziphindezela. Phakathi kukaCamila noNora ubudlelwane obukhetheke kakhulu buvela ngee-shades ze Thriller, kodwa ngenkanuko ngaphezulu. Yi ibali lokuba ngudade kunye nokuxhotyiswa kwabasetyhini, kunye nomthwalo wemfihlakalo kunye neqhinga elinamandla kakhulu.
AL: Ngaba ungabuyela kwimemori yencwadi yokuqala oyifundileyo?
I-PC: Ndicinga ukuba ndiyayikhumbula loo nto inesihloko Amabali egolide. Andikwazi ukukuxelela umbhali. Yayinye ingqokelela yamabali thile yokuziphatha kodwa kakhulu ixesha. Utata wandithengela yona kwintengiso yentakumba. Wayeyithanda kakhulu izinto zakudala. Kwakusekuqaleni kweminyaka engamashumi asixhenxe kwaye ngeloxesha yayiyincwadi endala. Ndiyakhumbula ukuba naye wandithenga Moby Dick, kodwa ndayifunda kamva.
AL: Kwaye ibali lokuqala olibhalileyo?
I-PC: Into yokuqala endiyibhalileyo yile imibongo. Ukususela esemncinci kakhulu ndaqala ukufunda UGloria Fuertes kwaye ndayithanda. Ndicinga ukuba, ngandlela thile, bendizama ukumxelisa.
PC: Xa ndandineminyaka elishumi elinesibini ndafunda Umoya wasempuma, umoya wasentshona, de Pearl S. Buck. Indiphawule kakhulu kuba ngencwadi kwaye ndisemncinci kangaka, ndafumanisa enye inkcubeko, enye indlela yokucinga nokuqonda umhlaba. Inkcubeko yemveli yamaTshayina xa ithelekiswa nengqondo yasentshona ethi inoveli ibonakalise yandothusa kakhulu. Ingakumbi indima yabasetyhini kwiindawo ezahlukeneyo.
AL: Umbhali oyintandokazi? Unokuba ngaphezulu kwesinye nangamaxesha onke.
PC: Ndizohlala naye Agatha Christie, yohlobo alubhalileyo kunye nokuba lilungu onguvulindlela kwaye ungumfazi obalaseleyo. Ewe baninzi ababhali abanomdla kum, kodwa ukusukela ukubakhankanya bonke kunokuba yinto engenabulungisa kwabanye abaninzi, ndishiyeke nenenekazi elikhulu eliyimfihlakalo.
I-PC: Kunzima kakhulu ukukhetha, kodwa kuye kuthi qatha umzekelo, Inkosana encinci. Njengomntwana ngendandiyithanda ukuba yinyani. Yinto efana nomhlobo ocingelwayo. Kwakhona alicia NguLewis Carroll. Kodwa i uludwe ingaba engapheliyo.
PC: Zimbini kuphela: cwaka kunye neempahla ezintle. Ukusuka apho uhambo luqala.
PC: Kuya kufuneka ndibhale ekhaya. Andazi ukuba ndingajonga njani kwenye indawo. Kukho abo babhala kumathala eencwadi okanye nakwiivenkile ezenza ikofu. Ndifuna ukuba wedwa noxolo. Kum luhlobo lwesimo sokuzimela endifuna ukugxila kuso.
PC: Eyona ndiyithandayo Thriller kodwa ndafunda yonke into. Into endiyicelayo kukuba libali elilungileyo kwaye libaliswe kakuhle. Ndingumfundi we Imibongo kunye ye midlalo.
KWI: Ufunda ntoni ngoku? Ukubhala?
I-PC: Okokugqibela kweTrilogy UBlas Ruiz Grau, Awuyi kufa. Ndingu iphela inoveli. Okunye noir yasekhaya ngesihloko sentlalo eshushu kakhulu. Ukuza kuthi ga ngoku ndingabala.
AL: Ucinga ukuba imeko yokupapasha injani? Zininzi kakhulu iincwadi, baninzi ababhali?
PC: Yifayile ye- Unzima kakhulu kwaye unzima umhlaba. Kukhuphiswano oluninzi kwaye luhlala ixesha elifutshane apho imithetho yentengiso ngamanye amaxesha inamandla ngakumbi kunaleyo yokubhala. Ndizama ukubaleka loo mandla athi ngamanye amaxesha ajikeleze icandelo kwaye Gxila ekwenzeni uncwadi olulungileyo. Ndingumbhali, ngumsebenzi wam lowo. Yonke enye into ingaphaya kwamandla am.
Ndicinga ukuba bekusoloko kukho abantu ababhalayo, kuphela ukuba i-intanethi isenze sabonakala ngakumbi. Ekugqibeleni ihlala isenzeka ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno, njengakwelinye icandelo. Oku akuthethi ukuba kufanelekile kwaye nomonakalo wesibambiso awenzeki.
AL: Ngaba umzuzu wobunzima esiphila kuwo unzima kuwe okanye ungagcina into elungileyo kwiinoveli ezizayo?
I-PC: Ngokwam, le ngxaki iye yatyebisa. Ngethamsanqa, impilo isihloniphile. Ndihlala ndizama ukukhupha izinto ezintle kwiimeko ezinzima. Ekupheleni kosuku, yindlela esimele ukujika ngayo iimeko. Andicingi, nangona kunjalo, ukuba ndiyisebenzisa kwiincwadi endizibhalayo. Ndinoluvo lokuba Kuthatha ixesha kunye nomgama kumxholo wento esiyifundileyo ukuyifaka ngaphakathi kunye nokusinceda ngokuyilayo. Ndiyifaka ngakumbi kwinqanaba lomntu. Ndibulela yonke imihla ngako konke okuhle endikunikwa bubomi. Ndiyazixabisa izinto ezincinci ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » UPaz Castelló. Udliwanondlebe nombhali we Akukho namnye kuthi oya kuba nemfesane